DataNumen: Siyaasadda Soo Celinta
Bogga ugu weyn Siyaasadda Soo celinta
Waxaan aad ugu kalsoonahay tayada badeecadaheena iyo adeegyadeena waxaan ku siineynaa seddexda dammaanad ee soo socda adiga 30 maalmood gudahood markaad iibsato, si loo hubiyo inaad 100% ku qanacsan tahay.
Waxaan bixinaa ah ugu fiican waxyaabaha soo kabashada xogta iyo adeegyada adduunka. Taasi waa sababta aan u abuurnay kuweenna Dammaanad Qaadashada ugufiican ™ - Waxaan dammaanad ka qaadeynaa badeecadeenna iyo adeegyadeena inay ka soo kaban doonaan xogta ugu badan faylkaaga, nidaamkaaga ama qalabkaaga waxyeelloobay. Haddii aad u baahatid inaad heshid qalab soo kaban kara xog ka badan tanyada, si buuxda ayaan kuugu soo celin doonnaa amarkaaga!
Dammaanad-qaadkani wuxuu xaqiijinayaa doorkeenna hoggaamineed iyo u heellanaanta macaamiisheenna. Waxaan nahay shirkaddii ugu horreysay ee keliya ee soo kabata xogta ee bixisa dammaanad noocan oo kale ah, oo muujineysa kalsoonida weyn ee alaabteenna.
Wixii macluumaad faahfaahsan, fadlan guji halkan.
Isku day Kahor Iibsashada Dammaanadda
Dhammaan alaabooyinkayaga waxaa lagu iibiyaa qaab isku day ah-kahor-iibsi. Taasi waa, waad soo dejisan kartaa oo isticmaali kartaa nooca demo si aad uga soo kabato faylkaaga musuqmaasuqa, bilaash. Haddii feylka dib loo soo ceshan karo, nooca demo ayaa tusi doona muuqaalka hore ee waxyaabaha la soo kabsaday, ama wuxuu soo saari doonaa feyl bandhig, ama labadaba. Iyada oo ku saleysan natiijooyinka nooca demo, waxaad ogaan kartaa in xogta aad rabto dib loo soo celin karo iyo in kale.
Kadib, ka dib markaad iibsato nooca buuxa, haddii feylka lagu hagaajiyay nooca buuxa uusan u dhigmin natiijooyinka nooca demo, waanu soo celin doonaa dalabkaaga.
Dammaanad qaadashada Qancinta 100%
Inkasta oo labada dammaanadood ee kor ku xusan ay marwalba hubinayaan inaad hesho kan ugu fiican iyo most Natiijooyinka soo kabashada ee lagu qanco, waxaan horay u sii qaadnay hal talaabo oo dheeri ah, anagoo bixinayna 100% dammaanad qancin Haddii sabab kasta ha noqotee, aadan ku qanacsanayn sheyga ama adeegga aad iibsatay, markaa waxaad heli kartaa lacag celin buuxda.
Xusuusin: Waxaad u baahan tahay inaad ku siiso faahfaahinta sababta lacag celinta. Haddii loo baahdo, faylka asalka ah ee musuqmaasuqa ah sidoo kale waxaa looga baahan yahay ujeedada xaqiijinta oo keliya. Faylkaaga iyo xogtaada waxaa loo hayn doonaa 100% qarsoodi. Eeg annaga Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah wixii faahfaahin ah. Haddii loo baahdo, waxaan kula saxiixan doonnaa NDA si aan u damaanad qaadno tan.